Ha moogaanina labadan dhacdo xagaaga ee waaweyn! - Cuntooyinka giraangiraha
Ha seegin labadan dhacdo ee xagaaga weyn!
Xilliga xagaaga ayaa socda, taasna macnaheedu waa 'waa xilli labo dhacdo oo waaweyn oo aad qarax ku qaban karto inta aad ku taageerayso Cuntooyinka Lugaha. Marka hore waa Cunnooyinka saaxiibtinimada leh ee qoysaska Naafada Waqooyi-Bari Cuntada Rakaabka ka dibna wuxuu imanayaa cunnooyinka moodada- iyo cunnada loo gudbiyo ee Heels bisha Ogosto. Akhriso si aad waxbadan ugabarato midkastoo dhacdooyinkan ah!
Isku soo bax gaari xamuul ah waqooyi-bari - July 13
Sannadkii 4aad ee isku xigta Cunnooyinka Lugaha Lugta ayaa ka qaybqaadan doona Isu-soo-baxa Gawaarida Cuntada Northeast! Munaasabadan waa bilaash in laga soo qaybgalo waxaana ku jiri doona muusig toos ah, ciyaaro, cunto, iyo biir farsamo oo ay bixiso Able Seedhouse + Brewery. Waxaa jiri doona kharash $5 ah oo loogu talagalay curcurada haddii aad xiiseyneyso inaad ku raaxeysato mid ka mid ah xirfadaha farsamada ee Able dhammaan lacagaha ka soo baxa kuwanna waxay taageeri doonaan Cuntada Lugaha.
Qaar ka mid ah cuntooyinka aad filan karto inaad ku raaxeysato waxaa ka mid ah Baabuurta Cuntada loo yaqaan 'Animales Food Truck, Anchor Fish iyo Chips, iyo MN Nice Cream. Liiska buuxa ee gawaarida cuntada, safka muusikada, iyo iibiyeyaasha kale, booqo Bogga dhacdada Facebook.
Cuntooyinka Cidhibtooda - Ogosto 15
Meals on Heels waa xafladdeenna xagaaga si aan u taageerno Cuntada Lugaha iyo bixinta in ka badan 1 milyan oo cunto ah waayeelka u baahan ee ku nool magaalooyinka Mataanaha ah sannad kasta. Dhacdada sanadkan waxay dib ugu laabanaysaa Nicollet Island Pavilion-ka Minneapolis markay tahay Aug. 15. Dhammaan iibka tigidhada waxay si toos ah u taageeraan Metro Meals on Wheels.
Kaqeybgalayaashu waxay ku raaxeystaan dhadhanka menu-yada makhaayadaha maxalliga ah ee ugu sarreeya, baarka martida loo yahay oo leh biir iyo khamri, iyo habeen ay ka buuxaan raaxo iyo hawlo xiiso leh Intaas waxaa sii dheer dhamaan xafladaha fiidkii waxaa lagu aasay dhinaca dambe ee Wabiga Mississippi iyo muuqaalka hoose ee Magaalada Minneapolis. Ha iloobin inaad soo bandhigto kabaha aad jeceshahay maadaama emcee Sarah Edwards ay dooran doonto labadaba kabaha ragga, haweenka iyo kooxda si loogu daro qofka ku guuleysta Swank Soles dhamaadka fiidka, halkaasoo dadku ay doortaan guuleystaha.
Wax dheeri ah baro oo tikidhada ka iibso khadka tooska ah Cuntadaonheelsevent.org.
Ma sugi karno inaan ku aragno xagaagan!